Borondy - Wikipedia
I Borondy dia firenena ao Afrika Afovoany, tsy manana morontsiraka, manana velaran-tanby mirefy 27 834 km2. Isan' ireo firenena ao amin' ny faritry ny Farihy Lehibe izy. I Bujumbura no renivohiny. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. Mamaritra an' i Borondy ao avaratra i Roanda, ao atsinanana sy atsimo i Tsady, ao andrefana ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô, ka ny farihy Tanganyika sy i Ruzizi no sisin-tany voajanahary manefitra azy amin' ity firenena ity. Ny faritr' orany dia +2.
Sainam-pirenen' i Borondy
Mari-piandrianan' i Borondy
Saritany maneho an'i Borondy ao Afrika
Anisan' ireo firenena kely velaran-tany indrindra aty Afrika i Borondy. Be tendrombohitra sy be lembalemba ity firenena ity.
Nisy mponina miisa 8 749 000 ny ao Borondy araka ny fanisana natao tamin' ny taona 2012. Makitroka ny mponina ao Borondy, ny ankamaroany dia monina ambanivohitra. Ny Hoto no maro anisa indrindra (85 %), manaraka azy ny Totsy (14 %), avy eo ny Toà (1 %). Anisan' ny manamarika ny tantaran' i Borondy ny ady an-trano nifanandrinan' ny Hoto sy ny Totsy. Ny ankamaroan' ny vahoaka borondey dia Kristiana. Ny fiteny kirondy sy ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialy any Borondy.
Anisan' ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany i Borondy izay manorina ny toekarenany amin' ny fambolena sy ny fiompiana.
1 Tantaran' i Borondy
1.1.1 Talohan' ny fanjanahan-tany
1.1.2 Ny fanjanahan-tany
1.2 Taorian' ny fanjanahan-tany: fanjakà-mpanjaka avy eo repoblika
1.2.2 Fijoroan' ny Repoblika
1.3 Ady an-trano
1.3.1 Fahasahiranan'ny firosoana ho amin'ny demôkrasia
1.3.2 Ady an-trano nampisy ra mandriaka
1.3.3 Fihanak' ilay ady an-trano amin'ny firenena manodidina
1.4 Famerenana ny fandriam-pahalemana
1.4.1 Ezaka fandaminana nataon'i Nelson Mandela
1.4.2 Fananganana governemanta tetezamita
1.5 Fahasahiranana nandritra ireo taona 2010
1.5.1 Nanjaka tamin'ny fifidianana kaominaly ny CNDD-FDD
1.5.2 Fifidianana tsy neken'ny mpanohitra
1.5.3 Nandimby i Pierre Évariste Ndayishimiye
2 Jeôgrafian' i Borondy
2.1 Ny tany sy ny rano ary ny zava-manana aina
2.1.3 Biby sy zavamaniry
2.2 Ny mponina sy ny tanàna
2.2.1 Ny mponina
2.3.1 Amin’ ny ankapobeny
2.3.2 Ny fambolena
2.3.3 Ny fiompiana sy ny jono
2.3.4 Ny harena an-kibon’ ny tany sy ny taozava-bavety
2.3.5 Ny fifanakalozana amin’ ny any ivelany
3.3 Ny fampianarana.
Tantaran' i BorondyHanova
Talohan' ny fahaleovan-tenaHanova
Nahitana ny asan-tanan'ny olona tany amin’ ny 10 000 taona lasa any ho any ny moron’ ny farihy Tanganyika. Ny Pigmea dia efa niorim-ponenana tao amin' ny faritra misy an' i Borondy tamin’ ny fahatongavan’ ny mpamboly tamin’ ny taonarivo voalohany. Ny Totsy dia nanorim-ponenana tao amin’ io faritra io tamin’ ny taonjato faha-15 ka nametraka fitondrana mifototra amin' ny fananana tany sady nanjakany ara-pôlitika tamin’ ny Hoto. Nametraka ny lamina misy sarangam-poko mifototra amin’ny fananana biby fiompy koa izy ireo. Izany fiarahamonina izany dia notarihin’ny mpanjaka (atao hoe mwami), nefa ny rafitra ara-pôlitika sy ara-piarahamonina dia nalefaka kokoa noho ny tao Roanda. Mateti-pitranga kokoa noho ny tao Roanda ny fifanambadian’ ny Totsy sy ny Hoto.
Nozanahin'ny Alemàna i Borondy tamin’ireo taona 1880 ka nantsoina hoe Orondy (Urundi), avy eo nakambana tao amin’i Afrika Atsinanana Alemàna, niaraka tamin’i Roanda. Nalain’ny tafika belza avy ao Kôngô i Roanda sy i Orondy tamin’ny Ady Lehibe Voalohany, izay namorona ny fari-tanin’i Roanda-Orondy (Ruanda-Urundi). Tamin’ny taona 1923 dia nankinin’ny Fikambanan’ny Firenena ho tantanan’i Belzika i Roanda-Orondy, fa taorian’ny Ady Lehibe Faharoa kosa dia napetraky ny Firenena Mikambana eo ambany fiahiana belzia. Tamin’ny taona 1925 dia nametraka fitondrana atao hoe indirect rule ("fanapahana tsy mivantana") izay nanome tombon-dahiny ny Totsy ny mpanjana-tany belza. Napetraka ho ara-dalàna ny fisarahan’ny Totsy sy ny Hoto ka ny fiaviana ara-poko dia lasa singa maha izy ny tsirairay teo anatrehan’ny fanjakana.
Taorian' ny fanjanahan-tany: fanjakà-mpanjaka avy eo repoblikaHanova
Tamin’ny 1 Jolay 1962 dia nahazo fahaleovan-tena i Borondy, nisafidy ny fitondrà-mpanjaka fehezin-dalàm-panorenana izy. Nisy namono anefa i Louis Rwagasore andrian-dahy mpandova izay nanindrahindra ny fandraisana anjaran’ny foko rehetra amin’ny fitondrana. Taorian’izay dia nisy namono koa ny piraiminisitra hoto Pierre Ngendandumwe. Nanomboka tamin’izay ny tsy fahamarinan-toeran’ny pôlitika tao Borondy. Ny revôlisiona nataon’ny Hoto tao Roanda ao akaiky, izay nanoherana ny fitondrana tompomenakely totsy, dia nanosika ny Hoto ao Borondy hitaky ny fizaràna ny fahefana ara-pôlitika.
Fijoroan' ny RepoblikaHanova
Tamin’ ny volana Jolay 1966 dia naongan’ny miaramila ny mpanjaka Mwambutsa IV, nosoloana an’i Ntare V zanany izay tia fandrosoana. Efa-bolana taorian’izay dia nanambara ny fijoroan’ny repoblika ny kapiteny Michel Micombero sady notendrena ho filoham-pirenena. Tamin’ny volana Novambra 1976 dia nisy nanongana i Micombero ka ny jeneraly Jean-Baptiste Bagaza no nandray ny fahefana. Napetraka tamin’ny taona 1981 ny lalàm-panorenan’ny antoko tokana. Lany tamin’ny fifidianana tsy nahitana mpirotsaka hafa i Bagaza tamin’ny taona 1984 nefa nisy nanongana koa tamin’ny taona 1987, ka nasolo azy i Pierre Buyoya. Naneho ny finiavany hametraka lamina manaja ny fitovian-jon’ireo fianakaviambe totsy sy hoto ny mpitodra vaovao. Na dia izany aza dia nisy ny famonoana Hoto marobe tamin’ny taona 1988.
Fahasahiranan'ny firosoana ho amin'ny demôkrasiaHanova
Lany tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka ny lalàm-panorenana vaovao tamin’ny volana Marsa 1992. Tamin’ny volana Jona 1993 dia notanterahina ny fifidianana izay nahalany an’i Melchior Ndadaye. Hoto I Melchior Ndadaye. Novonoin’ny miaramila totsy anefa izy iray volana taorian’io ka niteraka herisetra mifanesy izay nahafatesana olona miisa 50 000 any ho any izany, sady nahatonga ny fandosiran’ny Hoto miisa eo amin’ny 70 000. Nandimby an’i Ndadaye i Cyprien Ntaryamira ary niezaka ny hampitsahatra ny famaizana nataon’ny miaramila nanjakan’ny Totsy. Maty niaraka tamin’i Juvénal Habyarimana filohan’i Roanda izy tamin’ny nitifirana misily ny fiaramanidina nitondra azy ireo, taloha kelin’ny fotoana hipetrahan’ny fiaramanidina teo amin’ny seranan’i Kigali ao Roanda tamin’ny 6 Avrily 1994.
Ady an-trano nampisy ra mandriakaHanova
Nisahana ny andraikitry ny filoham-pirenena i Sylvestre Ntibantunganya (Hoto), nefa fahefana sarintsariny no nananany. Nandritra izany dia nandriaka ny ra tao Roanda tamin’ny fandringanana ny Totsy sy ny Hoto mpandanjalanja, ka natahorana hihanaka mankany Borondy.
Tamin’ny volana Marsa 1996 dia nilaza ny mpitondra teny manokan’ny Firenena Mikambana fa 15 000 any ho any ny isan’ny olona maty tamin’ny taona 1995, ka ny ankamaroany dia olo-manga hoto. Ny fikambanana Amnesty International dia nanameloka ny fomba nampiantranoana ireo mpitsoa-ponenana hoto roandey tao amin’ny tobin’ny mpitsoa-ponenana tao Borondy. Tamin’ny volana Jolay 1992 dia nandray ny fahefana i Pierre Buyoya. Nandritra izany fotoana izany dia niely tamin’ny faritra maro tao Borondy ny fikomiana hoto.
Fihanak' ilay ady an-trano amin'ny firenena manodidinaHanova
Nisy fiantraikany tamin’ny ady an-trano tao Borondy ny ady tao Roanda sy tao Kôngô satria nitovy tamin’ny nahazo ireo tao amin’ireto firenena mpifanila vodirindrina ireto ny zava-manjo ny Hoto mpitsoa-ponenana tao Borondy ka samy nanohana ny fikomiany avy, toraka izany koa ireo mpioko tao Oganda. Tamin’ny taona 1997 dia nahazo ny mpitsoa-ponenana borondey koa ny fandripahana ireo Hoto mpitsoa-ponenana miisa manodidina ny 300 000 notanterahin’ny tafika roandey (nandraisan'i Paul Kagame anjara) nifanampy tamin’i Laurent-Désiré Kabila. Tao anatin’ny efatra taona dia nahafaty olona miisa 250 000 ny ady an-trano tao Borondy, ary nisy 800 000 ny Hoto natao sesitany sy nafatratry ny tafika tanatin’ny toby tamin’ny fomba tsy mendrika ny maha olombelona.
Famerenana ny fandriam-pahalemanaHanova
Ezaka fandaminana nataon'i Nelson MandelaHanova
Nelson Mandela tamin’ny 1994
Ny fifampiraharahana rehetra natao tamin’ny volana Jona 1998 tao Arusha any Tanzania, nelanelanin’i Julius Nyerere filoha tanzaniana teo aloha, dia niezahana namolavolana programa ho an’ny governemanta tetezamita izay nandraisan’ireo mpifanandrina anjara, nefa tsy nandresy lahatra azy ireo tanteraka. I Nelson Mandela izay mpanelanelana dia natoky ny filoha Buyoya amin’ny famahana ny olana. Tamin’ny volana Aogositra 2000 dia nisy ny fifanarahana momba ny fandriam-pahalemana sy momba ny fampihavanana teo amin’ny fitondrana sy ny mpanohitra izay nosoniavina tao Arusha vokatry ny fanelanelanana nataon’i Nelson Mandela. Notapahina tamin’izany ny fandefasana miaramila avy ao Afrika Atsimo hiandraikitra ny fiarovana ireo mpanao pôlitika sy fitandroana ny filaminana. Tsy nampitsahatra ny ady an-trano anefa izany. Niato ny fanampiana iraisam-pirenena, ary nitontongana ny toekarena ary nihenjana hatrany ny fisaraham-bazan'ny tafika teo am-pelan-tanan’ny Totsy.
Fananganana governemanta tetezamitaHanova
Natsangana ny governemanta tetezamita tamin’ny volana Novambra 2001. Nozaraina ara-drariny ny fahefana tao amin’izany governemanta izany. Nanohy niantsoroka ny andraikitra napetraka aminy ny filoha Pierre Buyoya (Totsy) nandritra ny valo ambin’ny folo volana fa i Domitien Ndayizeye kosa, izay sekretera jeneralin’ny antokon’ny Hoto (ny Front pour la démocratie au Burundi na Frodebu) no lasa filoha lefitra. Nitohy ny tetezamita tamin’ny volana Avrily 2003 sady nanatanteraka ny famindram-pahefana araka ny fifanarahana tao Arusha: niala i Pierre Buyoya ka nosoloan’ny filoha lefitra Domitien Ndayizeye. Ilay Totsy atao hoe Alphonse-Marie Kadégé no natao filoha lefitra.
Ny fifampiraharahana momba ny fandriam-pahalemana izay nanaovan’ i Afrika Atsimo fanelanelanana dia niafara tamin’ ny fanaovana sonia fifanarahana tamin’ ny 16 Novambra 2003, teo amin’ ny governemanta borondey sy ny fikambanana mpioko hoto (ny Forces pour la défense de la démocratie - FDD) tarihin’ i Pierre Nkurunziza. Niforona ny Opération des Nations unies au Burundi (ONUB) tamin’ny volana Mey 2004 hisahana ny fanohanana ny firosoana amin’ny fampihavanam-pirenena. Vita koa ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana momba ny fizaràna ny fahefana eo amin’ny Hoto sy ny Totsy tamin’ ny volana Aogositra 2004. Tamin’io volana io ihany anefa dia niseho ny fandripahana tao amin’ny tobin’ny mpitsoa-ponenana ao Gatumba taorian’ny fifanandrinana tamin’ny Repoblika Demôkratikan'i Kôngô. Nahafatesana mpitsoa-ponenana kôngôley totsy miisa 159 izany noho ny nafitsoky ny Forces nationales de libération (FNL), izay fikambanana hoto borondey mpioko sisa farany nanohy ny ady. Nisy ny fankatoavanana lalàm-panorenana vaovao izay lany tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ny 2005. Nisy koa ny fifidianana ny mpikambana ao amin’ny Antenimiera roa. Tamin’ny 19 Aogositra 2005 dia lany ho filoham-pirenena i Pierre Nkurunziza mpitarika ny vondron’ny mpioko hoto taloha (ny FDD).
Fahasahiranana nandritra ireo taona 2010Hanova
Nanjaka tamin'ny fifidianana kaominaly ny CNDD-FDDHanova
Dimy taona taty aoriana dia nihanibirioka ny fitondrana ka niteraka tsy hafaliana teo amin'ny Hoto sasany. Nahazo ny 2/3 n'ny toerana teo amin'ny fitantanana kaominina ny Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) izay notarihi'i Pierre Nkurunziza tamin'ny 26 Mey 2010. Niampanga azy ireo ho nanao hosoka goavana tamin'ny fifidianana ireo antoko hoto nanao sonia tany Arusha. Tsy nitovy hevitra amin'izy ireo ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona Eorôpeana. Nisy noho izany ny savorovoro tao Bujumbura. Nisy ny fisamborana ireo lohandohan'ny Hoto.
Fifidianana tsy neken'ny mpanohitraHanova
Nanao izay hisakanana ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony hatao amin'ny 28 Jona 2010 ireo antokon'ny Hoto. Nanampy ny mpitokona ny filoha teo aloha Domitien Ndayizeye. Maro ireo mpanohitra nosamborina ka nogadraina. Tanteraka ihany ny fifidianana na dia tsy nandray anjara ny mpanohitra, ka lany i Pierre Nkurunziza izay kandidà tokana. Tamin'ny taona 2015 dia nanao izay hahafahany milatsaka fanintelony i Pierre Nkurunziza. Tamin'ny 13 Mey 2015 dia saika voaongan'ny jeneraly Godefroid Niyombare ny filoha teny am-pandehanana. Nitolo-batana ireo mpanongam-panjakana taorian'ny ady mangotraka tao Bujumbura. Maro ny mpanohitra tratran'ny famaizana ary an-jatony maro ny maty. Ana hetsiny maro ireo Borondey nitsoa-ponenana. Nahemotra imbetsaka ny fifidianana ka tateraka ihany tamin'ny 21 Jolay 2015, ka nandresen'i Pierre Nkurunziza tamin'ny 69,41 %, na dia hitan'ny mpanaramaso maro fa najakan'ny hala-bato.
Nandimby i Pierre Évariste NdayishimiyeHanova
Ny jeneraly Évariste Ndayishimiye no voatendrin'ny antokon'i Pierre Nkurunziza handimby azy ho kandidà amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika izay natao tamin'ny 20 Mey 2020. Lany tamin'ny vato 68,72 izy.
Jeôgrafian' i BorondyHanova
Ny tany sy ny rano ary ny zava-manana ainaHanova
Manana velaran-tany mirefy 27 834 km² i Borondy. Isan’ ny firenena kely indrindra ao Afrika izy amin’ ny velaran-tany. Ny ankabeazan’ ny taniny dia misy lembalemba avo sy havoana. Mirefy 1 520 km ny salan’ ny haambo misy azy eo anelanelan’ ny ony Nily sy ny ony Congo. Midina izany rehefa miantsinanana sy mianatsimo-andrefana. Manasaraka an’ i Borondy sy i Tanzania ny renirano Ruzizi sy ny farihy Tanganyika izay samy ao amin’ ny Rift Valley. Ireto avy ireo renirano lehibe ao Borondy: i Ruzizi sy i Malagarazi ary i Ruvubu izay isan’ ireo loharanon’ i Nily.
Manana toetanin-jana-pehintany mangatsiatsiaka an-tany avo i Borondy. Ny sala-maripana anatin’ ny taona iray dia 21,1 °C eny amin’ ireo lembalemba fa 24,4 °C kosa ao amin’ ny Rift Valley. Amin’ ny main-tany, izay manomboka amin’ ny volana Mey ka miafara amin’ ny volana Aogositra, dia matetika misedra ny vokatry ny hain-tany i Borondy.
Biby sy zavamaniryHanova
Hivoka tsy dia misy hazo firy no mandrakotra ny ankabeazan’ ny velaran-tanin’ i Borondy. Ripaky ny tavy sy ny fiandrasana biby fiompy tafahoatra ny ala. Ny kininina, izay hazo nampidirina mba hiadiana amin’ ny fikaon-tany, sy ny akasià ao amin’ ny hivoka atsinanana ary ny palmie fanamboarana menaka eny amin’ ny tany fambolena no fahita matetika any. Isan’ ny biby fahita any ny lalomena, ny voay, ny karazan-dambo (phacochère), ny leôparda ary ny antilôpa.
Ny mponina sy ny tanànaHanova
Tamin’ ny taona 2008 i Borondy dia nisy mponina miisa 8 691 005 any ho any izay manome hakitroka 339 mp./km². Noho izany dia isan’ ireo firenena misy mponina be hakitroka indrindra aty Afrika izy. Tamin’ ny fiantombohan’ ireo taona 1990 dia nahatratra 3 % ny fitombon’ ny mponina isan-taona, ary ny tahan’ ny fahafatesan’ ny zaza dia nahatratra 61 ‰. Latsaky ny 15 taona ny antsasaky ny mponina. Ny 89 %n’ ny mponina koa dia tantsaha nefa tsy dia ahitana tanàna madinika firy ny any Borondy satria miparitaka amin’ ireo havoana ny toeram-ponenana.
Hoto (Hutu) mpamboly ny 85 %n’ ny mponina ao Borondy fa ny 14 % kosa dia Totsy (Tutsi) mpiompy. Ny Toà (Twa), izay olona zeny (Pigmea) dia 1 %n’ ny mponina fotsiny.
Roa fotsiny ny tanàn-dehibe lehibe ao Borondy, dia i Bunjumbura renivohitra, izay ahitana mponina miisa 272 600 tamin’ ny taona 1986, sy i Gitega, izay misy mponina 95 300 tamin’ io taona io ihany. Tao Bunjumbura no nitragan’ ny fifanandrinan’ ny Totsy sy ny Hoto tamin’ ny taona 1992. I Gitega kosa dia toeram-ponenan’ ny mpanjaka taloha.
Amin’ ny ankapobenyHanova
Miankina indrindra amin’ ny fambolena ny toekaren’ i Borondy, noho izany dia isan’ ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany izy. Nisy fiantraikany lehibe tamin’ ny toekaren’ i Borondy ny ady an-trano tamin’ ny taona 1993 hatramin’ ny 2004. Ny PNB an’ i Borondy tamin’ ny taona 2004 dia teo amin’ ny 1 000 tapitrisa dôlara ary ny fidiram-bola isan’ olona dia 100 dôlara eo ho eo. Teo antenantenan’ ny taona 2000 dia nahatratra 1 000 tapitrisa dôlara ny trosa ivelany.
Ireto ny voly fanondrana, izay mitana ny 3/4n' ny velaran-tany voavoly: ny tsaramaso maina, ny katsaka, ny ampemba, ny mangahazo, ny vomanga ary ny akondro. Ny voly fanodina voalohany indrindra dia ny kafe, izay nahafahan’ i Borondy nandoa ny karaman’ ny mpiasam-panjakana tamin’ ny taona 1994 sy nahafahany nandoa ny trosa ivelany, noho ny fiakaran’ ny vidiny tamin’ izany fotoana izany. Nisolo miandalana ny dite ny landihazo, izay ahazoana vola antonony ihany.
Na dia tsy dia manana anjara toerana lehibe eo amin’ ny toekaren’ i Borondy aza ny fiompiana omby, dia manana ny lanjany ara-kolontsaina sy ara-piarahamonina amin’ ny Totsy ny fananana andiam-biby maro. Miteraka fikaohana manimba ny nofon-tany anefa ny toeram-piandrasana. Mandroso dia mandroso ny fiompiana trondro ary be mpanao ny fanjonoana eny amin’ ny renirano sy ny farihy.
Ny harena an-kibon’ ny tany sy ny taozava-bavetyHanova
Tsy dia misy firy ny fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany. Ny tanisokay sy ny volamena ary ny firapotsy no trandrahana amin’ izany. Manana tahirina oraniôma sy nikela betsaka i Borondy nefa tsy voatrandraka. Ny taozava-baventy voalohany indrindra dia ny fanodinana sakafo satria miezaka ny hanolo ny vokatra hafarana avy any ivelany amin’ ny vokatra eo an-toerana i Borondy. Miantoka ny 90 %n’ ny angovo ireo tohadranon’ i Rwegura sy Mugere.
Ny fifanakalozana amin’ ny any ivelanyHanova
Ny farantsa borondey (franc burundais) no vola ampiasaina ao Borondy. Tsy misy fifandanjana ny fifanakaozam-barotra amin’ ny any ivelany satria indroan’ ny sandan’ ny vokatra aondrana ny an’ ny vokatra hafarana. Miantoka ny 75 %n’ ny vola azo amin’ ny fanondranana entana ny vokatra kafe. Manaraka izany ny landihazo sy ny dite ary ny hoditra. Hafarana avy any ivelany, indrindra avy any Eorôpa Andrefana, ny lamba sy ny solitany.
Tsy ahitana lalam-by ny ao Borondy, ary ny tambajotran’ arabe dia mirefy 5 900 km eo fotsiny, ka ny ankabeazany dia lalan-tany. Taterina amin’ ny sambo mamaky an’ i Tanzania sy Zambia ary ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô ny entana aondrana na hafarana, ka mijanona ao amin’ ny seranan-tsambon’ i Bujumbura ao amin’ ny tendro avaratry ny farihy Tanganyika aloha. Betsaka koa ireo mpanondrana na mpanafatra entana an-tsokosoko avy ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô. Ao Bunjumbura ihany koa no ahitana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan’ i Borondy.
Ny fiteny kirondy (izay isan'ny fiteny banto, sady atao hoe kiniaroanda ao Roanda) sy ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialy ao Borondy. Maro koa ny mahay miteny soahily izay fiteny ifaneraseran’ ny mpivarotra.
Ny 66 %n’ ny Borondey dia Kristiana (Katôlika ny ankamaroany), fa ny 20 % kosa manaraka ny fivavahan-drazana animista. Ahitana mpino silamo vitsy an’ isa koa ao, izay 2 %n’ny mponina.
Ny tahan’ ny mahay mamaky teny sy manoratra tamin’ ny taona 2005 dia 53,9 %. Tsy andoavam-bola nefa tsy atao an-tery ny fampiarana ny zaza fito hatramin’ ny roa ambin’ ny folo taona. Mihoatra ny 600 000 ny zaza miditra an-tsekoly ambaratonga fototra any Borondy tamin’ ny taona 1990, fa 35 000 kosa ny ao amin’ ny ambaratonga faharoa ary 3 500 ny ao amin’ ny ambaratonga ambony. Tamin’ ny taona 1960 no nanorenana ny oniversiten’ i Borondy ao Bujumbura. Olana goavana any Borondy ny tsy fananana asa sy ny tsy fisian’ ny fiofanana amin’ ny asa ho an’ ny tanora borondey.
Jeôgrafian' i Borondy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Borondy&oldid=1045236"
Dernière modification le 17 Mey 2022, à 21:40
Voaova farany tamin'ny 17 Mey 2022 amin'ny 21:40 ity pejy ity.